Shock Abso အတွက် Powder Metal Sintered Part Base Valve
စိတ်ကြိုက် Stainless Steel ပါးလွှာသော ပြားချပ်ချပ်ချပ်ချပ်များ
Shock Absorber သည် Chrome Plating Piston Rod ကို အသုံးပြုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့် 55CrSI 60Si2Mn သံမဏိပစ္စည်း
ဂျာမန်အရည်အသွေး တရုတ်စျေးနှုန်း Monotube Damping ချိန်ညှိနိုင်သော...
၎င်း၏ လက္ခဏာများနှင့် ကွဲပြားသော အသုံးချနယ်ပယ်များ အရ ဓာတ်ငွေ့စမ်းများကို ထောက်ချောင်းများ၊ ဓာတ်ငွေ့ ပံ့ပိုးမှုများ၊ ထောင့်ချိန်ညှိမှုများ၊ ဓာတ်ငွေ့ချောင်းများ၊ dampers စသည်တို့ ဟုခေါ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့စမ်းများ ၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအရ၊ ဓာတ်ငွေ့စမ်းများ အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်။ အခမဲ့ဓာတ်ငွေ့စမ်းများ၊ အလိုအလျောက်သော့ခတ်ထားသောဓာတ်ငွေ့စမ်းများ၊ ဆွဲစုပ်ဓာတ်ငွေ့စမ်းများ၊ အခမဲ့ရပ်တန့်ထားသောဓာတ်ငွေ့စမ်းများ၊ ဆုံလည်ထိုင်ခုံဓာတ်ငွေ့စမ်းများ၊ ဓာတ်ငွေ့ချောင်းများ၊ dampers စသည်တို့ကဲ့သို့ ဤထုတ်ကုန်ကို မော်တော်ကား၊ လေကြောင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ပရိဘောဂနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။ စက်ယန္တရားများ ထုတ်လုပ်ရေး စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေး 1.50000 ကြိမ် သက်တမ်း သုံးစွဲပါသည်။
3. ISO9001 ၊ SGS ၊ TS16949 လက်မှတ် အောင်မြင်ပြီး
လျှောက်လွှာ ပရိဘောဂ၊ မော်တော်ကား၊ စက်များ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ကွန်တိန်နာ စသည်တို့
ပစ္စည်း ကာဗွန်သံမဏိ 20# / Stainless steel 304 / SS316
ချိတ်ဆက်မှုများ ဘောလုံးချိတ်ဆက်ကိရိယာ / သတ္တုမျက်လုံး / clevis စသည်ဖြင့်
အားသာချက် 1.Free နမူနာများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
2.အသေးစား MOQ ရရှိနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာအမိန့် 100 pcs ကိုလက်ခံနိုင်သည်။
ဝန်အလေးချိန် 50N၊60N၊80N၊100N၊120N၊ 150N သို့မဟုတ် အခြား
အရွယ်အစား သင့်တောင်းဆိုချက်အရ Standard သို့မဟုတ် Customized
အထုပ် ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲတွင် ဓာတ်ငွေ့စပရိန်တစ်ခုစီကို ထည့်ပြီး ပုံးပုံးထဲသို့ထည့်ပါ။
မျက်နှာပြင်ကုသမှု နာကျင်ခြင်း ၊ ကြိတ်ခြင်း ၊ ချောမွေ့သော အပေါ်ယံလွှာ
ပစ္စတင်တံ SAE1045၊ မျက်နှာပြင်ကုသမှု Chrome အဖြစ်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် QPQ ၊72h ဆားမှုန်ရေမွှားခုခံမှု
ချိတ်ဆက်မှုများ အနက်ရောင် သို့မဟုတ် ငွေရောင်၊ ပစ္စည်းသည် သံမဏိ သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ် ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆီတံဆိပ် ဆီတံဆိပ်ကို ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်မှ ဝယ်ယူခဲ့သည်။
1. Lift gas spring (Lift gas spring)၊
2. Self-locking ဓာတ်ငွေ့စမ်း
3. Free stop gas springs (ပွတ်တိုက်ဓာတ်ငွေ့စမ်းများ၊ ဟန်ချက်ညီသောဓာတ်ငွေ့စမ်းများ) ကို မီးဖိုချောင်သုံးပရိဘောဂများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။
5. Traction gas springs (ဓာတ်ငွေ့ traction springs)၊
6. Damper သည် မော်တော်ကားနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများတွင် ပိုမိုအသုံးပြုသည်၊
ဓာတ်ငွေ့စပရိန်၏ အရည်အသွေးကို အောက်ပါ ရှုထောင့်များမှ အဓိကအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်- ပထမ၊ ၎င်း၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် မကောင်းပါက၊ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ဆီယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် လေယိုစိမ့်ခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ 500N ကဲ့သို့သော တိကျမှန်ကန်မှု ဓာတ်ငွေ့စမ်းများအတွက်၊ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများမှ ထုတ်လုပ်သော အင်အားအမှားသည် 2N ထက် မကျော်လွန်ဘဲ၊ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများ၏ ထုတ်ကုန်များသည် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော 500N နှင့် ဝေးကွာနိုင်ပါသည်။ တတိယအချက်မှာ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို အပြည့်အဝပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအချက်မှာ လေဖြတ်စဉ်အတွင်း တွန်းအားတန်ဖိုး အပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီး၊ စံပြအခြေအနေတစ်ခုတွင် ဓာတ်ငွေ့စပရိန်သည် လေဖြတ်ခြင်းတစ်လျှောက် တွန်းအားတန်ဖိုးကို မပြောင်းလဲဘဲ ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ သို့သော်၊ ဒီဇိုင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်သည့်အချက်များကြောင့် လေဖြတ်ခြင်းရှိ ဓာတ်ငွေ့စပရိန်၏ တွန်းအားတန်ဖိုးသည် မလွှဲမရှောင်သာ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ၎င်း၏ပြောင်းလဲမှုပမာဏသည် ဓာတ်ငွေ့စပရိန်၏ အရည်အသွေးကို တိုင်းတာရန်အတွက် အရေးကြီးသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲမှု၏ ပြင်းအား သေးငယ်လေ၊ ဓာတ်ငွေ့စပရိန်၏ အရည်အသွေး ပိုကောင်းလေ၊ နှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊
Max Auto မှပြုလုပ်သော gas spring ကို QPQ သို့မဟုတ် Chrome Plating Treatment ဖြင့် piston rod ကိုအသုံးပြုပြီး သံချေးတက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်။
ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ အပိုင်းတိုင်းကို လေဖိအားစက်ဖြင့် စမ်းသပ်ခဲ့သည်၊ ဓာတ်ငွေ့တွန်းအား reuiqremnt ပြည့်မီကြောင်း သေချာစေရန်။
ယခင်- တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့် 55CrSI 60Si2Mn သံမဏိပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: Shock Absorber သည် Chrome Plating Piston Rod ကို အသုံးပြုသည်။
Stainless Steel Gas Spring ၊